Tilmaamaha Ganacsiga Yaryar ee Macluumaadka Baraha Bulshada | Martech Zone
Jimcaha, Agoosto 30, 2013 Douglas Karr
Weli kuma qanacsani in ganacsi kastaa diyaar u yahay inuu maal galiyo istiraatiijiyadda warbaahinta bulshada. Waxaa jira shirkado sida Apple oo kale leh sumado cajaa’ib leh, xayeysiin cajiib ah, iyo badeecooyin waaweyn oo suuq geyn ku dhex mara bulshada isticmaalkooda. Apple uma baahna inuu ku firfircoonaado baraha bulshada si uu u noolaado oo u kobco. Shirkadaha kale waxay kujiraan dhamaadka culeyska, oo leh adeega macaamiisha iyo arimaha qancinta macaamiisha. Ka fogaanshaha warbaahinta bulshada waxay noqon kartaa istiraatiijiyad wanaagsan illaa iyo inta ay hagaajinayaan nidaamyadooda iyo alaabooyinkooda.
Laakiin, shirkadda doonaysa inay qabsato saamiga suuqa, dhisato maamul, dhisayso saameyn ayna kobciso ganacsigooda, baraha bulshada waa qiimo jaban, dadaal sare oo lagu sameeyo sidaas. Waxaan leeyahay sare dadaal maxaa yeelay waxay u baahan tahay waqti iyo u hureyn adiga iyo kooxdaada si aad u soo saartaan nuxur una siisaan qiime ay ku kobciyaan dhagaystayaashaada oo ay ku dhisaan bulsho. Tani waxay si gaar ah run ugu tahay ganacsiyada yaryar ee aan haysan ilaha lacageed ee ay 'ku iibsadaan' xayeysiinta lagama maarmaanka u ah inay koraan.
Warbaahinta bulshada ayaa muhiim u noqotay qorshaha suuq geynta ganacsiga yar yar! Su’aasha joogtada ah ayaa ah: “sidee ganacsigaagu uga faa’iideysan karaa inta badan suuqgeynta warbaahinta bulshada?”. Ka raadi Tilmaamaha Ganacsiga Yaryar ee Xirfadaha Warbaahinta Bulshada, oo ah nooc cusub oo macluumaad ah oo ay kuu keeneen SuuqaMeSuite iyo Placester!